THANKS MUDANE: 10 Qodob oo uu ku guuleystay MD Farmaajo (MUST WATCH) | Arlaadi Online
Home Blog THANKS MUDANE: 10 Qodob oo uu ku guuleystay MD Farmaajo (MUST WATCH)
THANKS MUDANE: 10 Qodob oo uu ku guuleystay MD Farmaajo (MUST WATCH)
Axad June 25, 2017| Arlaadi Online
10 Arimood oo ay ku guuleysatay dowlada mudadii koobnayd ee ay jirtay:
1- La dagaalanka Musuq-maasuqa. 2- Garsoorka iyo Caddaalada. 3- Amniga magaalada Muqdisho (Inkasta oo ay maalmahaan danbe soo xumaanaysay oo kooxo daneystayaal ah oo isbahaystay ay ka shaqeeynayeen inay shacabka iyo dowlada iska horkeenaan ka dibna ay dowlada ku furaan mooshino isdaba joog ah si ay u fashiliyaan dowladnimada, Nabada iyo horumarka la hiigsanayo).
4- Isdhexgalka shacabka iyo ciidanka. 5- Isdhexgalka Madaxda iyo shacabka. 6- Go’aanka xiriirka dowlada Qatar. 7- Dhibkii garoonka Wajeer oo so dhamaaday. 8- Hormarinta Baasaboorka Soomaaliga. 9- Koontaroolka Shaqaalaha Dowlada. 10- Ka saarida Gabre ee Soomaaliya.
Halkaan ka daawo warbixin kooban oo ka hadlaysa waxqabadka dowlada Madaxweyne Farmaajo 4-tii bilood ee lasoo dhaafay. Maamulka Araaldi.net waxay qirayaan in Ra’iisul wasaare Khayre uu qabtay shaqo wanaagsan oo tayo leh ilaa hadana uu yahay Ra’iisul wasaarihii uga shaqada badnaa ee dalka.
Wuxuu Ra’iisul wasaaruhu mudanyahay in la boogaadiyo oo lagu Amaano shaqada uu dadkiisa iyo dalkiisa u qabtay ee ma mudna in Mooshin lala sugo inta ay uga dhamaanyaso lixda bilood ee dastuurka uusan saamaxayn.